SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: “အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး လမ်းကြောင်း ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား”
“အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး လမ်းကြောင်း ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား”
ဝါးလ်စရိ ဂျာနယ်တွင်ပါရှိသော “မြန်မာအတိုက်ခံများ အလျှော့အတင်း လုပ်ရန်စဉ်းစား နေပြီ” ဆိုသော ဆောင်ပါးကို ဖတ်ရှုပြီး သောအခါ ပြုံးလိုက်မိသည်။ ကျွန်တော်သည် စစ်အစိုးရကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ဦးသန့်အရေးခင်းမှ စတင်၍ ဆန့်ကျင်လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားတဦးအနေနှင့် စစ်ခေါင်းဆောင် များနှင့် အတိုက်ခံတို့၏ စိတ်ဓာတ်ရေးရာကို ရာစုနှစ် နှစ်စုကျော်အကြာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါ ၀င်ပတ်သက် သိရှိသူတဦး ဖြစ်၍ ကောင်းကောင်းနားလည် သဘောပေါက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
NCGUB ၏ လမ်းကြောင်းသစ်ဟုခေါ်သော အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းလမ်းကြောင်းသည် NLD ပါတီက ၁၉၉၀ အလွန်ကာလတွင် စတင်ကြိုးစားခဲ့သော် မအောင်မြင်သည့် လမ်းကြောင်းဟောင်း တခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ NCGUB နှင့် NCUB တို့အတူ ၎င်းတို့လက်သင့်ရာရွေးချယ်၍ ဖိတ်ခေါ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နအဖအပေါ် ကမ်းလှမ်းချက်သည် အရာထင် အကျိုးရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ကြိမ်းသေ ပြောရဲပါသည်။ စစ်အုပ်စုအနေနှင့် ၎င်းတို့အား အဖက်လုပ်၍ စကားတလုံး တလေမျှပင် ပြန်ကြားလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
ဂျာကာတာကွန်ဗင်းရှင်းတွင် ၎င်းတို့က သံတမာန်များကိုဖိတ်ကြားပြီး ၎င်းတို့၏ “အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး” လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ထိုအဆိုပြုချက် စာတန်းကို နအဖထံပေးပို့ပြီးဆုံးဖြတ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် နိုင်ငံရေးထောက်ခံအားပေးမှုတို့ကို နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များမှ ရရှိရန်ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုစာတန်း၏ အဆိုအရ အကယ်၍ နအဖစစ်အုပ်စုမှ ၎င်းစာတန်းပါအချက်အလက်များကို သဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက် ပါက အတိုက်ခံတို့အနေနှင့် စတင်ဆွေးနွေးရမည်။ ၎င်းစာတန်းအရ ပထမဦးဆုံး စတင် ဆွေးနွေးရမည့် အချက်မှာ (၂၀၀၈) ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကို အများ လက်ခံလာသည် အထိ ညှိနှိုင်း ရေးဆွဲရေးပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းအဆိုပြုချက်သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ကြောင်းကို ဆက်လက်တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါမည်။
(၁) ယနေ့အမျိုးသာ ရင်ကြားစေ့ရေးကို တင်သွင်းလာသော NCGUB, NCUB နှင့် ၎င်းတို့၏ လက်ရွေးစင် (၇) ဖွဲ့သည် ပြည်ပနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်အဖွဲ့စည်းများအဖြစ် ပြည်ပအင်အားစုများမှမသတ်မှတ်ထားပေ။ ၎င်းတို့စုစည်းထားသည့် ညီညွတ်ရေး ဆိုသည်မှာလည်း တကယ်ညီညွတ်ရေးမဟုတ် ကော်ကပ် ညီညွတ်ရေးသာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို NLD ပါတီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် NLD ပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသည့် ပါတီကြီး ဖြစ်သည်။ လူထုကြီးက ပါတီနောက်တွင်ရှိသည်။ ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာ့ ခေါင်းဆောင်သာမက ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းတဦးဖြစ် သတ်မှတ်ခံထား ရသူဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော NLD ပါတီနှင့် ၎င်းပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့မှ (နအဖ) အား အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကမ်းလှမ်းမှုကို နအဖမှပယ်ချထားခဲ့သည်။ NCGUB တို့ကဲ့သို့ ရော့ရဲရဲ ညီညွတ်ရေး လုပ်ထားပြီး ပြည်ပလှုပ်ရှားသူများမှ အော့နှလုံးနာနေသည့် အဖွဲ့အား နအဖသည် ထည့်၍ပင် စဉ်းစားလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
(၂) ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုနေသည့်ကြားမှ (နအဖ)တရားရုံးမှ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် ချမှတ် လိုက်သည်။ ဆိုင်းငံ့အဖြစ် ထောင်ဒဏ် (၁၈) လနှင့် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်သို့ သြဂုတ်လ(၁၁)ရက်နေ့တွင် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ထိုလုပ်ရပ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် NCGUB တင်သွင်းလာသည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို (နအဖ)မှ စိတ်မ၀င်စားကြောင်း ထပ်လောင်းသက်သေထူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲကို ဆက်လက် ချီတက်တော့မည့် အကြောင်း ကြေငြာလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
(၃) ဂျာကာတာ အုပ်စုဝင်တဦးဖြစ်သူ ကိုညိုအုန်းမြင့်မှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် “ကျွန်တော်တို့ ဘာကို လိုချင်တယ် ဆိုတာကို စဉ်းစားတာထက် စစ်အုပ်စုကဘာကိုလုပ်ပေး နိုင်တယ်၊ ဘာကို လုပ်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာကို စဉ်းစားပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟုဆိုခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပင် “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေှးနှင့် (၁၉၉၀)ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုအသိအမှတ်ပြုရေး” ဆိုသည့် အတိုက်အခံတို့မှ အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုနေခဲ့သည့် အချက်နှစ်ချက်ကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီး အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကိုညိုအုံးမြင့်တို့အနေနှင့် ၎င်းအချက်သည် စစ်အုပ်စုမှ လက်မခံနိုင်သည့် အချက်နှစ်ချက်အဖြစ် သဘောထား ခဲ့ကြသည်။ ယထာဘူတ ကျကျစဉ်းစား တွေးခေါ်ရလျှင် စစ်အုပ်စုသည် ၎င်းတို့ လွှတ်ပေးချင် သူများကို လွှတ်ပေးနေကြ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး လွှတ်ပေးချင်က လွှတ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အတွက် ပြဿနာမဟုတ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးလိုက် ပြန်ဖမ်းဆီးလိုက် လုပ်နေကျ ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ငြိမ်သောတရားဥပဒေ တည်ရှိမနေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးသည် စစ်အုပ်စုမှ လုပ်နိုင်သော အလုပ်ဖြစ်ပြီး မလုပ်သေးခြင်း သာဖြစ်သည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်က စစ်အုပ်စုအနေနှင့် သံဃာတော်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့ကြီးကို ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သံဃာတော်များ ခရီးသွားလာရာတွင် သံဃာမှတ်ပုံတင်ဖြင့်သာ သွားလာရတော့သည်။ ယခင်ကလို မှတ်ပုံတင်မရှိပဲ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့် ချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့သည်။ အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင်မရှိသော သံဃာတော်များသည် နိုင်ငံရေးအရ နိုးကြားသည့်အုပ်စုကြီးဖြစ်သဖြင့် ဗိုလ်နေ၀င်းမှ စိုးရိမ်သော အုပ်စုများထဲတွင် ထိပ်တန်းမှပါဝင်နေသည်။
၎င်းတို့အစီအရင်တိုင်း သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့နှင့် သံဃာ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့ကို အတည်ပြုပြီး သံဃာတော်များကို အစိုးရမှ ထိန်းချုပ်နိုင်သော အခြေအနေရသည့်နှင့်တပြိုင်နက် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားပေး၍ ထောင်မှလွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ သည်လည်း တိုင်းပြည်အာဏာကို စစ်အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် ထာဝရရောက်နေစေမည့် (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၎င်းတို့ ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရပြီးသည့်နောက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေး၍ အမှတ်ယူပေလိမ့်မည်။
ထိုစစ်အုပ်စု၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော စစ်တပ်မှ ဆက်လက်ဗိုလ်ကျစိုးမိုးထားနိုင်ရေး လမ်းစဉ်သည် (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရေးပင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲသည် (၂၀၀၈) ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ အပေါ်တွင် မူတည်၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုနိုင်ရေးကို စစ်အုပ်စုအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းရာစုနှစ်(၂) ခုနီးပါး ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ရသည်။
NCGUB မှ တင်သွင်းလာသော အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးစာတန်းကို သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ပါက ၎င်းစာတန်းသည် စစ်အုပ်စုမှတန်ဘိုးအထားဆုံးဖြစ်သည့်် (၂၀၀၈) ခု အခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် ရေးဆွဲရေး ပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရေးနှင့် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဆွဲရေး နှစ်ချက်တွင် မည်သည့်အချက်ကို စစ်အုပ်စုမှ လက်ခံလိမ့်မည်ဟု ထင်သနည်း?
စစ်အုပ်စုသည် မည်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်မှ ၎င်းတို့ရေးဆွဲထားသည့် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် ရေးဆွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ၎င်းတိှု့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားသည့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အလိုဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီး အတည်ပြုထားသည့် အခြေခံဥပဒေကို အစိုးရမည်ခံ လက်နက်ကိုင်တပ်မရှိသော လူခုနှစ်ဦးအဖွဲ့၏ ညွန့်ပေါင်း တောင်းဆိုချက်ကို စဉ်းစားပါ့မလားဟု မေးခွန်းထုတ် လိုက်ချင်ပါသည်။ ဤအချက်များသည် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို တကယ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ် တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့မဟုတ်ပဲ “အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ဟန်ပြအနေဖြင့်တင်ပြခြင်းမျိုးလားဟု” စဉ်းစားရန်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ တင်ပြသော အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးသည် အပေါ်ယံတင်ပြချက်သာဖြစ်သည်။ ပယ်ချခံရ မည်ကို ကျိန်းသေ သိပြီးဖြစ်လျှက် တင်ပြခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လျှင် မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တင်ပြခြင်းဖြစ်သနည်းဟု ဆန်းစစ်ကြည့်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။
NCGUB, NCUB သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကြည့်လျှင် ၎င်းတို့သည် ရာစုနှစ်တခုအတွင်း မဖြစ်ဖူးသေးသော အဓိက အဖွဲ့စည်းကြီး (၁၀) ဖွဲ့သည် ညီညွတ်စွာဖြင့် ဂျာကာတာတွင် ညီလာခံ ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းကြေငြာချက်သည် အချက်နှစ်ချက်ကို မီးမောင်းထိုး ပြနေခဲ့သည်။
(၁) NCGUB, NCUB တို့သည် လူသိရှင်ကြား ကုလသမဂ္ဂတွင် စစ်စိုးရ၏ ကိုယ်စားပြုမှုကို စိန်ခေါ်သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြဲခဲ့ကြသည်။ တဖန် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် ထပ်ကွဲကြပြန်သည်။ စစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အား ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ပယ်လိုသည့်အုပ်စုနှင့် မထုတ်ပယ်လိုသည့်အုပ်စု နှစ်ခုကွဲကာ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရသည့် အဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေပါသည်ဆိုသောသူများထဲတွင် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရန်သင့်မသင့် မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရခြင်းက သမိုင်းအမဲစက်တခုအဖြစ် တင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းမဲခွဲမှုတွင် စစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အား ကုလသမဂ္ဂမှထုတ်ပယ်မှုကို လက်မခံသည့်အုပ်စုမှ အနိုင်ရသွားသည်ကို ကြည့်လျှင် အဓိက အဖွဲ့ကြီးများတွင် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သော အုပ်စုက အရေးနိမ့်နေကြောင်း ထိုစဉ်ကတည်းက မီးမောင်းထိုး ပြခဲ့သည်။ ထိုအကွဲအပြဲကြောင့် ၎င်းတို့ကို ထောက်ပံ့နေသော အဖွဲ့အစည်းများက ညီညွတ်မှုမရှိခြင်းကို အကြောင်းပြ၍ ငွေကြေးဖြတ်တောက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်၊ ထို့ကြောင့် ဂျာကာတာညီလာခံသည် NCGUB, NCUB တို့အပြင် ၎င်းတို့လက်ဝေခံ မေဂျာ အဖွဲ့ကြီးများကပါ ညီညွတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြသနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ငွေကြေးထောက်ပံ့သူများက အားတက်သရော ပြန်လည်ကူညီလာကြမည်ဖြစ်သည်။
(၂) NCGUB အနေနှင့် ၎င်းအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် (၁၉၉၁) ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့တိုင် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူများကိုဦးဆောင်ဖိတ်ကြားပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ လှုပ်ရှားမှုအားရှင်းပြခြင်း အလျဉ်းမရှိခဲ့ချေ။ အခြားခြားသော အဖွဲ့စည်းများမှ ဖိတ်ကြားသည့်အခါ တက်ရောက်ပြီး မိန့်ခွန်းချွေသည့် အလုပ်သာ လုပ်နေခဲ့သည်။ ယခု ဂျာကာတာ အစည်းဝေးပွဲသည် ရာစုနှစ်တခုအတွင်း မဖြစ်ဖူးသေးသည့် ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့မှ ကြေငြာလိုက်ခြင်းသည် မည်သည့် အချက်ကို ရည်ညွန်းသနည်းဟု ဆန်းစစ်ကြည့်ရန် လိုပါသည်။
ထိုရာစုနှစ် (၁) ခုကျော် အတွင်း အဓိကအဖွဲ့ကြီးများစုစည်းမှုသည် တကယ့်စုစည်းမှုဟု ယူဆ၍ မရပါ လက်သင့်ရာ မိမိနှင့်အလွမ်းသင့်သူများကိုသာ ရွေးချယ်ဖိတ်ခေါ်သည့် ပွဲဖြစ်သည်။ မိမိစားရိတ် မိမိစားပြီး တစိုက်မတ်မတ် နိုင်ငံရေးကို ကျသည့်နေရာ၊ နိုင်သည့်ဝန်ထမ်းပြီး လုပ်နေသောသူများ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ကြားခြင်း အသိပေးခြင်း မရှိပဲပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးပွဲဖြစ်သဖြင့် တန်ဘိုးရှိသောစုစည်းမှုဟု မခေါ်နိုင်ချေ။ တဖက်မှလည်း NCGUB သည် ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်း ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများကို လျစ်လျူရှု ထားခဲ့ပြီး ဆယ်နှစ်အကြာကာလရောက်မှ တကြိမ်စုစည်းနိုင်သည်ဟု ၀န်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးစိန်ဝင်း၏ပြောနေကြစကားမှာ “ကျွန်တော်တို့မှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး” ဟူသော စကားသာ ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ်လုပ်နေသူများကို ရှောင်ရှားကြသည်။ လျို့ဝှက်ကြသည်။ တွဲမလုပ်ချင်ကြ။ ကိုယ့်အုပ်စု ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းလေးနှင့်သာ ခြံခတ် နေသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနေနှင့် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် နီးပါး အချိန်အတွင်း အဖွဲ့စည်းများ အားလုံးကို ဖိတ်ကြားသည့်ဆွေးနွေးပွဲ တခုတလေမျှ မလုပ်ခဲ့ပဲ အဖွဲ့စည်းများက ဖိတ်ကြားသည့် ဆွေးနွေးပွဲများကိုသာ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်နေရာ ယူထား သော်လည်း ကိုယ်က ဦးဆောင်လုပ်ရမှန်းမသိ။ အခြားအဖွဲ့များခေါ်ရာသို့သာ လိုက်တတ်သည့်အခြေအနေ အဆင့်တွင်သာ ရှိခဲ့သည်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ရန်အတွက် တပ်ထောင်ဖို့လိုသည်။ ထိုကိစ္စကို ဆွေးနွေးကြည့်ပါ ဆိုလျှင်လည်း ဦးစိန်ဝင်းက “အဲဒီလိုလုပ်ရင် ပိုက်ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ” ဟု ပြောတတ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ABSDF ဖွဲ့ကာစက ကျွန်တော်တို့ တပ်ထောင်လျှင် ပိုက်ဆံရမှာ မဟုတ်လို့ တပ်မထောင်ဘူးကွာဆိုသည့် အတွေးမျိုးမရှိခဲ့ဘူးချေ။ တပ်ထောင်ခဲ့သည်မှာ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် တပ်ထောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။”
ယနေ့တော်လှန်ရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် NCGUB ကဲ့သို့ အစိုးရအမည်ခံအဖွဲ့စည်းမှအစ အသီးသီးသော အဖွဲ့အစည်း များသည် “ပရိုပိုဆယ်နိုင်ငံရေး” အသွင် ကူးပြောင်းလာပြီး နောက်ပိုင်း တော်လှန်ရေးစိတ်၊ တော်လှန်ရေး သဘောတရားပျောက်ကွယ်၍ ငွေရနိုင်သည့် အလုပ်မှလွဲ၍ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းမှ သွေဖယ်၍ သွားခြင်းသည် အားလုံးအတွက် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။ ပို၍ဆိုးသည်ကား ၎င်းတို့က အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ အမည်ခံပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်စားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများ ဂိုဏ်းကြီးများ ဖွဲ့ပြီး တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ထောက်ခံခြင်း၊ ပေါင်းစားခြင်း၊ တကယ်လုပ်နေသူများ၏လုပ်ငန်းများကို ဟန့်
တားခြင်း၊ ဂိတ်စောင့်များလုပ်၍ပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် တော်လှန်ရေးကိုအနုကြမ်းစီးကာ သာယာ နေခဲ့ကြသည်။
တချိန်က အစည်းအဝေးတခုတွင် တက်ရောက်သူတချို့က NCGUB အနေနှင့် ငွေမည်မျှရသည်။ ဘယ်လို နေရာတွင် သုံးသည်၊ ဘာတွေလုပ်နေသည်တို့ကို ရှင်းပြရန်ဆွေးနွေးသော အခါ ဦးစိန်ဝင်းက “ကျွန်တော့်ကို မေးတဲ့သူတွေကို ပြန်မေးချင်တယ် ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ကို အစိုးရဆိုပြီး အခွန်ဘယ်လောက်ပေးနေလို့လဲ၊ အစိုးရဆိုတာ ကိုယ့်ကို အခွန်ပေးတဲ့ သူတွေကို ရှင်းပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်အခွန်မပေးတဲ့ သူတွေကို ရှင်းပြစရာ မလိုဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ကို ငွေကြေးအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသာ ရှင်းပြမယ်” ဟုဆိုခဲ့ဘူး ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအထုပ်ကို တင်လာသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတကာသို့ ၎င်းတို့မှာ ကောင်းမွန်သော မဟာဗျူဟာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ပြီးပြီဖြစ်၍ ထိုလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ငွေလိုသည် ငွေပေးပါဟူ၍ တောင်းရန်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးထက် ၎င်းတို့ လက်ဝါးရိုက်ထားသော အုပ်စုတို့၏ စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေရန်အတွက် ထောက်ပံ့ ငွေရရှိရေး သက်သက် လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်လိုက်သဖြင့် ရရှိလာသော အကျိုးဆက် နှစ်ရပ်မှာ….
၁။ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက ၎င်းတို့အား အော့နှလုံးနာမှု ရွံရှာမုန်းတီးမှုတို့ကို
၂။ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူများ အကြားတွင် ပေါ်လစီရှုပ်ထွေးမှုကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး၊
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမည်လော၊ ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက် ရမည်လော ဆိုသည့် တွေဝေမှု၊ စိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်မှု၊ စိတ်ပျက်မှု တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
NCGUB ကိုယ်စားလှယ် ကိုသောင်းထွန်းက“အဓိက အင်အားစုဖြစ်တဲ့ (NLD)နဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း ကြီးများ အတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ တနည်းနည်းနဲ့ မပါဝင်ခဲ့ရင် ဘေးရောက် သွားမည့် အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုပြောကြားချက်အရ NCGUB ရဲ့ အသေအကြေ ဆောင်ရွက်ချက်သည် (နအဖ) ပြုလုပ်သော ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ၀င်နိုင်မလဲဆိုသည့် တွေးခေါ်ကြံဆမှုဟု ယုံကြည်ရပါသည်။
ပြည်ပတွင် တကယ်အရည်ချင်းရှိသောခေါင်းဆောင်များ သူ့အုပ်စုနဲ့သူ တစိုက်မတ် မတ်လုပ်နေပြီး ပြည်တွင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ သူ့အစုနှင့်သူ ရှိနေကြပါသည်။ ၎င်းအုပ်စုများသည် ယခုအခါ တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင်တည် ဆောက်ခြင်း သတင်းဖလှယ်ခြင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းတို့ကို ခံစားချက်၊ ခံယူချက် အပြည့်ဖြင့် ပူးတွဲ ပြုလုပ်နေကြသည်။ တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှုတို့ဖြင့် နှစ်(၂၀)ကျော် အတွေ့ကြုံအရ စုစည်းလာကြသည်။ ပို၍ နီးကပ်လာကြသည်။ ၎င်းတို့သည် မိမိတို့ ယုံကြည်ရာကို မိမိအုပ်စုဖြင့် တူညီသောလုပ်ငန်းများတွင် အခြားဖွဲ့စည်းများနှင့် ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ပရိုပိုဆယ် နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများနှင့် ကွာခြားချက်မှာ မိမိ အိပ်ကပ်ထဲမှ ငွေနှင့် မိမိယုံကြည်ရာကိုလုပ်ကြသဖြင့် ထိရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှု တချို့ သည် လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများထက် ပိုထိရောက်မှုရှိသည်။ ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားသူများသည် ၎င်းတို့ ယုံကြည်ရာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သမိုင်းရှိသူ ခေါင်းဆောင်များကိုသာ ဆက်ဆံခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ပူးတွဲ၍ လုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လိုကြသည်။
တော်လှန်ရေးကို ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလိုသော ငွေထုပ်ပိုက်ထားသူများကို ယုံကြည်မှုလည်းမရှိ၊ တွဲလုပ်လို စိတ်လည်း မရှိချေ။ ထို့ကြောင့် ငွေကြေှးရှိသောအဖွဲ့အစည်းကြီးများသည် အောင်မြင်မှု မရရှိပဲ ရပ်တန့် ဆုတ်ယုတ် နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် (၂၀၀၈) ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေအတည်ပြုရေး ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် “ Vote No & No Vote” ဟူသည့် မဲလုံးဝမပေးပဲ ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် မဲသွားပေးပြီး ၎င်းအခြေခံဥပဒေအတည်မပြုနိုင်ရန် ဆန့်ကျင်မဲပေးခြင်းဟူ၍ အယူအဆနှစ်ခု ကွဲထွက်လာခဲ့သည်။ အောက်ခြေထုအဖွဲ့စည်းကြီးများနှင့် နယ်စပ်ရှိ အဖွဲ့ အစည်းအချို့က လုံးဝမဲမပေးပဲ ဆန့်ကျင်ရန်။ “ No Vote” ကို လုပ်ချင်ကြသည် သို့ရာတွင် မဲရုံသို့ သွားပြီး ဆန့်ကျင်မဲပေး၍ “ Vote No” ကိုလုပ်ချင်သူများက ငွေကြေး ထောက်ပံ့သူများကို ၎င်းတို့တွင် အင်အားရှိကြောင်း (နအဖ) ၏ အခြေခံဥပဒေ အတည်မဖြစ်စေရန် “ Vote No” လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဆန့်ကျင်နိုင်မည်ဟုအာမခံ၍ US ငါးသိန်းကို လက်ခံရယူပြီး Vote No Campaign ကို ဦးဆောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ အများအသိပင်ဖြစ်သည်။ ရလာဒ်မှာ (နအဖ) မှ အကောက်ကြံနည်းမျိုးစုံသုံးလျှက် အခြေခံဥပဒေကို ၉၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့် အတည်ပြု
သွားနိုင်သည့် အတွက် (နအဖ)၏ အခြေခံဥပဒေကို ၎င်းတို့က မဲပေး၍ အတည်ပြုပေးလိုက် သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားရသည်။ အမှန်မှာ အဓိက အဖွဲ့စည်းများဟု နာမည်တပ်ထားသူများသည် ပြည်တွင်းမှလက်ခံနိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်များမဟုတ်သည့်အပြင် ၎င်းတို့ကိုလည်း ပြည်တွင်းမှ ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်ထားသည့် သူများမှာလည်း ငွေကြေးရရှိခြင်းကြောင့်သာ လုပ်ကိုင်ပေးကြပြီး တကယ့်ခံစားချက်၊ ခံယူချက်ရှိသူများမဟုတ်ခြင်းသည် အဓိကအားနည်းမှု ပင်ဖြစ်သည်။
ယခုလည်း အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးလမ်းကြောင်းကို (နအဖ)မှ ငြင်းပယ်လိုက်ပါက ဂျာကာတာအုပ်စုတွင် နှစ်စုကွဲသွားနိုင်သည်။ တစုသည် နဂိုမူလရပ်တည်ချက်အတိုင်း အမာလိုင်းသို့ ပြန်လည်ဦးတည်သွားပြီး စီပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုတင်းကြပ်စွာပြုလုပ်ရေး၊ ကုလသမဂ္ဂတွင် မြန်မာ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဖယ်ရှားရေး၊ ကာကွယ်မှု ပေးရန် တာဝန်ဆိုသည့် R2P အရ နိင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေသော ပြည်သူများအား ကယ်တင်ရေး၊ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးတွင် စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်များအဖြစ်တင်နိုင်ရေးတို့ကို ပြန်လည်ပြုလုပ် လာကြအုံးမည် ဖြစ်သည်။ ကျန်အုပ်စုကတော့ရွေးကောက်ပွဲကို ခေါင်းငုံ့ဝင်ကြဖို့ရှိသည်။ နိဂုံချုပ်အားဖြင့်
၁။ ညီညွတ်ရေးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ၊
၂။ ဘယ်လို မဟာဗျူဟာချမှတ်ရမလဲ ဆိုသည်ကို နက်နက်နဲနဲ စဉ်းစားဖို့လိုပြီ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တနည်းနည်းဖြင့်မှမ၀င်လျှင် ဘေးရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ
ရန်သူကို ဒူးထောက်အညံ့ခံရေး အတွေးအခေါ်သာ ဖြစ်သည်၊
ငါတို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ရသမျှယူနိုင်အောင် ၀င်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ NCGUB ရဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ။ မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်လည်း မဟုတ်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ညီညွတ်ရေး ဆိုတဲ့စကားဟာ လူတိုင်းပြောနေတဲ့စကား လူတိုင်း အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို သိနေတဲ့ အကြောင်းအရာ တခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကိုဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တာလဲလို့ မေးစရာ ရှိလာပါသည်၊ အဓိက ပြည်ပ နိုင်ငံရေးမှာ ညီညွတ်ရေးမလုပ်နိုင်တာက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မကြေလည်မှု၊ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ခြံခတ်နေထိုင်ရေး ထောက်ပံ့သူများ အလိုကျ တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမှ သွေဖယ်ပြီးလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့က ခြံစည်းရိုးတွေအကုန်ရိုက်ချိုးပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထက် ငါတို့ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်။ လုပ်ရမည်။ အဲဒီအတွက် အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပြောရဲရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးခေါ်ကို ကိုင်စွဲနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ထောက်ပံ့သူတွေကို ငါတို့နိုင်ငံမှာ မင်းတို့နိုင်ငံတွေလို လူတွေက အုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တဖွဲ့ချင်းမဟုတ်ပဲ အုပ်စုအလိုက်ရှင်းပြရမယ်။ ဒါ့အပြင် ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ရှိတဲ့ လှုပ်ရှားသူတွေကိုဖိတ်ပြီး တလေးတစား လူရာသွင်းဆွေးနွေးရင် အများက ထောက်ခံလာမှာ ဖြစ်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ လမ်းစဉ်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာချပြဆွေးနွေး၊ တကယ်လည်း အကောင်အထည် ဖော်မယ်ဆိုရင် မြန်မာ့အဖွဲ့စည်းတွေ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် လူဟောင်းတွေ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့စည်းတွေအာလုံး ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပံ့မှုနဲ့ တော်လှန်ရေးကို စတင် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ၊ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလဲ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေပါလာမှာပဲ၊ ယနေ့ပြည်သူတွေက ရွှေပြည်အေး သမားတွေကို မျှော်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တွေကို မျှော်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင် လူတသောင်းကျော် တောထဲ ရောက်လာတော့ ဘယ်သူက ကျွေးခဲ့တာလဲ? ဆိုတာကို ပြန်မေးဖို့သင့်ပါတယ်၊ တော်လှန်ရေးကကျွေးခဲ့တာပါ တော်လှန်ရေး သမားတွေက ပေးခဲ့တာပါ။ ပိုက်ဆံဆိုတာ၊ ထောက်ပံ့မှုဆိုတာ ကိုယ်က တကယ်လုပ်နိုင်ရင် နောက်က လိုက်လာတာပါ။ ပိုက်ဆံနောက်မလိုက်ပဲ ယုံကြည်ရာကိုလုပ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမည့် အလုပ်ကတော့ အမျိုးသား ကွန်ဂရက်ကြီး ခေါ်ယူရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကွန်ဂရက်ကြီးမှာ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ငြိမ်းအဖွဲ့များ၊ ကျောင်းသားမျိုးဆက်များ၊ သံဃာတော်များ၊ တတ်သိပညာရှင်များ အားလုံး ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မြန်မာအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ကြီး ခေါ်ယူနိုင်ရေးကို အများက ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကွန်ဂရက်ကြီးမှ တိုက်ပွဲဝင်အစိုးရကို ခေါင်းဆောင်နိုင်သူ ပြတ်သားသူတွေကို ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင်းပွနေသော တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ တပ်ပေါင်းစုအတွင်းမှ ထပ်ဖွဲ့ထားသည့် ဘော်ချက်နေသော တပ်ပေါင်းစုကလေးများ အားလုံးကို ဖျက်သိမ်း၍ (ဖဆပလ) အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကဲ့သို့တခုတည်းသော အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ရန် သမိုင်းပေး အခြေအနေအရ လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်တို့ကို လက်နက်မဲ့နည်းလမ်းတခုတည်းဖြင့်မရ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်နဲ့ပါ ပေါင်းစပ်မှ ရနိုင်မည်ဆိုသည့် အယူအဆကို ၎င်းမြန်မာအမျိုးသားများ ကွန်ဂရက်ကြီးမှ ကမ္ဘာသိ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်၍ “ငါတို့ ဒီလိုမြင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်မယ်၊ မင်းတို့ပြောနေတဲ့ လက်နက်မဲ့နည်းက မင်းတို့နိုင်ငံမှာပဲရမယ်၊ လူအသက်ကို တန်ဘိုးမထားတဲ့ မိစ္ဆာတွေရဲ့လက်ထဲမှာ လက်နက်မဲ့ကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးဟာ ဖြိုခွဲခံခဲ့ရပြီးပြီ၊ သံဃာတော်တွေရဲ့ ရွှေဝါရောက်တော်လှန် ရေးကြီးကိုလည်း လက်နက် အားကိုးနဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျိုးစားမှုကိုလည်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ်နဲ့ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီ၊ ဒါကြောင့် ငါတို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ငါတို့အစိုးရဖွဲ့မယ်၊ အစိုးရမှာ တပ်လိုတယ်၊ ငါတို့ရဲ့တပ်ဟာ ပြည် ထောင်စု တိုင်းရင်းသား အားလုံး ပါဝင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒီတပ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က၊ ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်၊ ပြည်သူတွေ အတင်းအဓမ္မ ချောဆွဲခိုင်းနေတာတွေ ရပ်တန့်ဖို့၊ ကျေးရွာတွေကို အတင်းအကြပ်ပြောင်းရွေ့နေတာကို ရပ်တန့်ဖို့၊ ကလေးငယ်တွေ စစ်ထဲသွပ်သွင်း နေတာတွေကို တားဆီးဖို့၊ ပြည်ထောင်စုဘွား တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီး ငယ်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ တပ်ရဲ့မတရားမှုကို မကြိုက်လို့ ဘက်ပြောင်းလာတဲ့ အရာရှိ အကြပ်တပ်သားတွေကို လက်ခံဖို့၊ ကြိုဆိုဖို့ ကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်၊ ငါတို့ တပ်ဖွဲ့က အကြမ်းဖက်ဖို့မဟုတ်ဘူး၊
ဒါကြောင့် ငါတို့ အကူအညီလိုတယ်၊ ငါတို့လမ်းစဉ်မှန်ကန်ကြောင်းကို နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေက ထောက်ခံနေကြပြီဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရဲရမယ်။ နိင်ငံတကာ အကူ အညီမရရင် တိုက်မှရမယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်တဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူ လူထုရဲ့ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုနဲ့ဆက်လုပ်ရဲရမယ်
“တပ်ဖွဲ့ရင် ပိုက်ဆံရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ” ဆိုရင် ဘယ်တော့မှတော်လှန်ရေးဟာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ။